आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल असोज २२ गते सोमबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ८ तारीख – पुरा पढ्नुहोस्……
आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल असोज २२ गते सोमबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ८ तारीख
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल असोज २२ गते सोमबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ८ तारीख आश्विन कृष्ण पक्ष चतुदर्शी तिथी १०ः५० बजे सम्म पश्चात औंसी तिथी उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र १४:०० बजे सम्म पश्चात हस्ता नक्षत्र ब्रह्म योग शकुनि करण पश्चात चतुष्पद करण चन्द्रमा कन्या राशिमा सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु औंसी श्राद्ध दर्शश्राद्ध पितृ विसर्जन निशी बार्ने श्रीप्राणनाथजीको जन्मोत्सव श्री कृष्णप्रणामी –
सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । देश बिदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । तपाइ द्वारा सम्पादीत कार्य बाट गैर ब्यत्तित्व हरुले फाइदा उठाउनेछन । अरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।
खोज तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनको क्षेत्रमा उत्तम समय रहेकोछ । अधुराकार्यहरु पुन सुचारु हुनेछन । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा आम्दानि क्षेत्र सबल रहने योग रहेकोछ ।
मनोरञ्जनका क्षेत्रमा दिन ब्यतित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन रम्नेछ । भुमि तथा वाहान सुख प्राप्त रहनेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानी उत्तम साबित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्य सम्पादित रहनेछन ।
बल तथा प्रराक्रमका क्षेत्रबाट जटिल कार्य सम्पादित रहनेछन । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा बृद्धि हुनेछ । प्रतिश्पदा जन्य कार्यमा तपाई अब्बल स्थान प्राप्त गर्नु हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला ।
स्थीर क्षेत्रको लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । वाणिमा मधुरता छाउनेछ । कला कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । अरुको बिश्वासमा पर्नाले कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ ।
सामाजीक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । सामान्य मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ ।
भोगबिलासीताका साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु् उत्तम रहनेछ । नेत्र तथा सिरको समस्याले सताउन सक्नेछ । शत्रु पक्ष सबल रहनाले कार्य क्षेत्रमा सावधानि अपनाउनु होला ।
रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथमा कामकाजको अवसर प्राप्त रहनेछ । आर्य आर्जनका बिभिन्न श्रोत हरु फेला पर्नेछन । कार्य क्षेत्रमा पदोन्नतीको समेत सम्भाबना रहेकोछ ।
अधुरा तथा टागींएर रहेका कार्य सहजता पुर्ण ढंगमा सम्पादित रहनेछन । सभा सम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको अवसर प्राप्त रहनेछ साथै सामान्य मान प्रतीष्ठा समेत प्राप्त रहनेछ । अरुलाई आर्कशीत पार्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
यात्राकारक दिन रहेकोछ । कुनै धार्मीक कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । नसोचेको क्षेत्रबाट सामान्य धनराशी हात पर्नाले मन प्रशन्न रहनेछ । मित्रजनहरुको साथसहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन ।
बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेकोछ । गरीरहेको कार्य सम्पादनमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढीलाईको सामना गर्नु पर्नेछ । खानपानमा बिषेश सावधानि अपनाउनु होला ।
ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । पारीवारीक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । मनोरञ्जनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले बिषेश साथ दिएकोछ । – ज्यो.पं.सरोज घिमिरे /
Prevहे दैब लोक गायक भण्डारीको सबैलाई रुवाउने भिडियो बाहिरियो- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
Nextदाङमा डरलाग्दो दुर्घटना, मोटरसाईकलको ठक्करबाट शरीरमा पसे रड….
धर -धरी रोए ज्ञानेन्द्र शाही, खुट्टाको नङ निस्किने गरी यातना। अस्पतालको सैयाबाट समर्थकलाई यसो भने -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आज ‘को बन्छ करोडपति’मा यी महिलाले जितिन् यति धेरै रकम, राजेश हमाल चकित-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
भ्रस्टाचारीलाइ नङ्ग्याउन रबिले सुरु गरे यस्तो अभियान ‘ म पनि’ भिडियो हेरेर सक्दो शेयर गरौ।
अन्तरजातिय प्रेमबिबाह गर्न खोज्दा निर्मम मारिएका नवराजको यसरी अन्त्यʼष्टि गरियो, सारा गाउलेको रुʼवाबासी (भिडियो सहित)